Degmadu waxay ku dhawaaqday isbeddelo ku saabsan qaybinta tallaalka - princetoncovid.org
Qaybta Caafimaadka ee Degmada Mercer waxay shaacisay horaantii todobaadkan inay wax ka badal ku sameysay qaybinta talaalka iyadoo lagu saleynayo dardaaranka Waaxda Caafimaadka NJ. Fadlan riix halkan loogu talagalay Cusbooneysiinta Talaalka Febraayo 10.
** Fadlan ogow: Haddii aad qaadatid qadar labaad oo loo qorsheeyay Waaxda Caafimaadka Princeton, waxaad heli doontaa qiyaastaas taariikhda loo qorsheeyay.
Isdiiwaangalinta Talaalka - Ku biir liiska sugitaanka adoo isticmaalaya Nidaamka Jadwalka Tallaalka New Jersey. Buuxinta foomka diiwaangelinta hore waxay qaadataa illaa 15 daqiiqo. Waxaa lagu weydiin doonaa xoogaa su'aalo ah si aad u go'aamiso goorta aad u-qalanto inaad hesho tallaal. Haddii dhibaato xagga farsamada ah kaa haysato diiwaangelinta, ka wac Khadka Caawinta Jadwalka COVID (855) 568-0545 ama buuxi tan Foomka Caawinta.
Liiska Sugida Jira - Haddii aad ku jirto liiska sugitaanka Princeton, waxaa kula soo xiriiri doona Qaybta Caafimaadka ee Mercer County iyo / ama Waaxda Caafimaadka Princeton marka laguu doorto ballanta. Haddii aad ku jirto liiska sugitaanka oo aad ku tallaasho meel kale, fadlan email Waaxda Caafimaadka ee degmada in laga saaro liiska sugitaanka. Fadlan la xiriir waaxda wixii ku saabsan ballamaha ama xaaladda liiska sugitaanka.